ဘုန်းကံ ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီး များသာ ဝတ်ဆင် ခွင့်ရတဲ့ မလ္လိကာ တန်ဆာ ဝတ်ဆင်သူ ပေါ်လာပြီ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ – Zartiman
ရတနာတွေကို တင်း နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် ပြည်ပေါင်းဆို(၇၀)ဆယ် တင်းနဲ့တွက်ရင် (၄) တင်း နှင့် (၆) ပြည်ပါ ။ အခြား ရတနာ တွေလည်း ရေတွက်လို့ မရပါဘူး။ ရွှေပိဿာချိန် ကလည်း (၁) ထောင်ဆိုတော့ လေးလွန်းလို့ သာမန်အမျိုးသမီး တွေ ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ မဝတ်ရုံနိူင် ပါဘူး။ ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီး တွေသာ ဝတ်ရုံနိူင်ပါတယ် ။
ဘုန်းကံ ကြီးမားတဲ့ အမျိုးသမီး ( ၃ ) ဦးကတော့ ဘုရားရှင် လက်ထက်အ ခါက မဟလ္လတာ တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ခဲ့ရတာ ဒီကမ္ဘာမှာ ( ၃ ) ယောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
12 . 8 . 2020 နေ့က သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှာ စတုတ္ထမြောက် မဟလ္လတာ တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဆရာတော် သံဃာတော် တို့အား ဝါဆိုသင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းနေစဉ် မဟာလတာ တန်ဆာကို မမြင်ဖူးသူများ ကြည့်ထားကြပါ ။ ဦးဇင်းတို့လည်း အခုမှ မြင်ဖူး တယ်။ ဝတ်ချင်ကြလား ။ အမျိုးသမီး (၃) ဦးသာ ဝတ်ဆင်နိူင်တဲ့ ခေါင်းအစ ခြေအဆုံး မဟလ္လတာတန်ဆာ ပါ။
ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ ကတော့ စိန်အစစ်(၄) ပြည်၊ ပုလဲ (၁၁) ပြည် မြ နှင့် သန္တာ (၂၂) ပြည်၊ နီလာနှင့်ပတ္တမြား (၃၃) ပြည် အခြား ရတနာ တွေလည်း မရေတွက်နိူင်လောက်အောင် များပြား ပါတယ်။ချုပ်တဲ့ချည်ကရွှေချည် ငွေချည်နဲ့ပါတန်ဆာကြီး ရဲ့တန်ဖိုးဟာ (၉) ကုဋေ လက် ခအနေနဲ့(၁) သိန်း ပေးရပါတယ်။ ပန်တိမ်သည်ပေါင်းက (၅၀၀)ရာနှင့် (၄) လကြာအောင် လုပ်ရပြီး (၄) လကြာမှ အားလုံးပြီးပါတယ် ။
ဆင်မြန်းလိုက်လို့ အဝေးကမြင် ရရင် ဒေါင်းအစစ် ကနေသလိုပါပဲတဲ့ ။ လမ်းသွားရင်လည်း ရွှေခြူ ငွေဆွဲတွေရဲ့ သံစုံသာယာ တေးလေးတွေ ကလည်း သာယာငြိမ့်ညောင်းစွာထွက်ပေါ်နေပါသေးတယ် ။ မဟလ္လတာ တန်ဆာကို ဝတ်ဆင်ရမည့်သူ ကလည်း အဲဒီဘဝဆင်ပြောင်ငါး စီး ကဲ့သို့ အားမာန်ကြီးတဲ့ သူဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှလည်းဝတ်ဆင်နိူင်ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့် … အရှင်ဣဿရိယ / အထက်မင်းလှ
ရတနာတှကေို တငျး နဲ့တှကျမယျဆိုရငျ ပွညျပေါငျးဆို(၇၀)ဆယျ တငျးနဲ့တှကျရငျ (၄) တငျး နှငျ့ (၆) ပွညျပါ ။ အခွား ရတနာ တှလေညျး ရတှေကျလို့ မရပါဘူး။ ရှပေိဿာခြိနျ ကလညျး (၁) ထောငျဆိုတော့ လေးလှနျးလို့ သာမနျအမြိုးသမီး တှေ ဘယျလိုနညျးနှငျ့မှ မဝတျရုံနိူငျ ပါဘူး။ ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့ အမြိုးသမီး တှသော ဝတျရုံနိူငျပါတယျ ။
ဘုနျးကံ ကွီးမားတဲ့ အမြိုးသမီး ( ၃ ) ဦးကတော့ ဘုရားရှငျ လကျထကျအ ခါက မဟလ်လတာ တနျဆာကို ဝတျဆငျခဲ့ရတာ ဒီကမ်ဘာမှာ ( ၃ ) ယောကျပဲ ရှိခဲ့ပါတယျ ။
(၁) ဝိသာခါ ကြောငျးအမကွီး
(၂) ဗန်ဓုလ စဈသူကွီးကတျော မလ်လိကာ
(၃) ဗာရာဏသီ သူဌေးကွီးရဲ့သမီး သုမနာတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
12 . 8 . 2020 နကေ့ သီရိလင်ျကာ နိုငျငံမှာ စတုတ်ထမွောကျ မဟလ်လတာ တနျဆာကို ဝတျဆငျပွီး အမြိုးသမီးတဈဦး ဆရာတျော သံဃာတျော တို့အား ဝါဆိုသင်ျကနျး ဆကျကပျ လှူဒါနျးနစေဉျ မဟာလတာ တနျဆာကို မမွငျဖူးသူမြား ကွညျ့ထားကွပါ ။ ဦးဇငျးတို့လညျး အခုမှ မွငျဖူး တယျ။ ဝတျခငျြကွလား ။ အမြိုးသမီး (၃) ဦးသာ ဝတျဆငျနိူငျတဲ့ ခေါငျးအစ ခွအေဆုံး မဟလ်လတာတနျဆာ ပါ။
ပါဝငျသော ပစ်စညျးမြား ကတော့ စိနျအစဈ(၄) ပွညျ၊ ပုလဲ (၁၁) ပွညျ မွ နှငျ့ သန်တာ (၂၂) ပွညျ၊ နီလာနှငျ့ပတ်တမွား (၃၃) ပွညျ အခွား ရတနာ တှလေညျး မရတှေကျနိူငျလောကျအောငျ မြားပွား ပါတယျ။ခြုပျတဲ့ခညျြကရှခေညျြ ငှခေညျြနဲ့ပါတနျဆာကွီး ရဲ့တနျဖိုးဟာ (၉) ကုဋေ လကျ ခအနနေဲ့(၁) သိနျး ပေးရပါတယျ။ ပနျတိမျသညျပေါငျးက (၅၀၀)ရာနှငျ့ (၄) လကွာအောငျ လုပျရပွီး (၄) လကွာမှ အားလုံးပွီးပါတယျ ။
ဆငျမွနျးလိုကျလို့ အဝေးကမွငျ ရရငျ ဒေါငျးအစဈ ကနသေလိုပါပဲတဲ့ ။ လမျးသှားရငျလညျး ရှခွေူ ငှဆှေဲတှရေဲ့ သံစုံသာယာ တေးလေးတှေ ကလညျး သာယာငွိမျ့ညောငျးစှာထှကျပျေါနပေါသေးတယျ ။ မဟလ်လတာ တနျဆာကို ဝတျဆငျရမညျ့သူ ကလညျး အဲဒီဘဝဆငျပွောငျငါး စီး ကဲ့သို့ အားမာနျကွီးတဲ့ သူဖွဈရပါမယျ။ ဒါမှလညျးဝတျဆငျနိူငျပါတယျ။
ခဈြခွငျးမြားစှာဖွငျ့ … အရှငျဣဿရိယ / အထကျမငျးလှ